Wararkii ugu dambeeyay xildhibaan ku geeriyooday rabshado ka dhacay Baydhabo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Wararkii ugu dambeeyay xildhibaan ku geeriyooday rabshado ka dhacay Baydhabo
Wararkii ugu dambeeyay xildhibaan ku geeriyooday rabshado ka dhacay Baydhabo
Waxaa maalintii labaad magaalada Baydhabo ka socda rabshado iyo dibadbaxyo ay dhigayaan dad kasoo horjeeda xariga Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur kaas oo shalay dowlada Federaalka ay xabsiga dhigtay.
Wararkii ugu dambeeyay ee haatan aan helayno ayaa sheegaya in rabshado ay saaka markale ka qarxeen Baydhabo iyadoona dad dibadbax dhigaya ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Baydhabo.
Dibadbaxa saaka ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa sababay in dad careysan ay taayaro ku gubaan wadooyinka halbowlaha u ah magaaladaasi Baydhabo iyadoona ciidamada amaanka ay isku dayayaan in ay kala eryaan dibadbaxayaasha.
Wararka kale ee aan ka helayno magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in rabshado saaka ka dhacay magaaladaasi uu ku dhintay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Xildhibaanka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Cabdishakuur Buule,waxaana uu ahaa gudoomiyaha amniga Baarlamaanka maamulka Koonfur galbeed lamana oga cidda dishay hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay xili uu ku guda jiray waan waan nabadeed.
Si kastaba xaalada magaalada Baydhabo ayaan la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto maadama ay kusii badanayaan rabshadaha iyo dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha Roobow iyadoona ay sidoo kale jiraan abaabul ciidan oo ay wadaan maleeshiyaad daacad u ah Mukhtaar.